लिम्बु भाषा, लिपिका सर्जक, अन्वेशक शहिद सिरिजङ्गा को हुन् ? बौद्ध लामाहरुले किन उनको हत्या गरे ? « Pana Khabar
लिम्बु भाषा, लिपिका सर्जक, अन्वेशक शहिद सिरिजङ्गा को हुन् ? बौद्ध लामाहरुले किन उनको हत्या गरे ?
-अर्जुनबाबु माबुहाङ, किरात संस्कृतिका अध्येता
यस्तो छ लिम्बु लिपिका संस्थापकको कथा
आज लिम्बु भाषा, लिपिका सर्जक, अन्वेशक शहिद सिरिजङ्गाको ३१३ औं जन्मजयन्ती मनाइदैछ । इतिहासकार इमानसिं चेम्जोङका अनुसार सिरिजङ्गाको जन्म सन् १७०४ मा याङरुपको सिनाममा मंसिर पूर्णिमाका दिन भएको हो ।
सिरिजंगाले चलाएको लिपिलाई नै सिरिजङ्गा लिपि भनिन्छ । जुन किरातहरुको आफ्नो लिपि हो ।
हडसनले मैवाखोलाका जोभानसिं फागो, छथर ताङ्खुवाका गुनमान खजुम र च्याङ्ग्रेसिं फेदाङमालाई लिम्बूका मुन्धुम, संस्कार, भाषा, इतिहास भन्न र लेख्न लगाएर संकलन गरेका थिए । यस्ता लिम्बुका सामाग्रीहरू हडसन पाण्डुलिपिका रूपमा हाल इण्डिया अफिस लाइब्रेरी लण्डनमा सुरक्षित छ ।सिरिजङ्गाका बारेमा थाहा पाउन हामीले हडसन पाण्डुलिपिका बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । बेलायती विद्वान ब्रायन हडसन नेपालमा रेजिडेण्ट भएर सन् १८२० देखि सन् १८४५ रहिसके पश्चात पनि फेरि १८४५ देखि १८५८ सम्म दार्जिलिङमा बसेका थिए । त्यहाँ रहँदा उनले पूर्वी नेपाल र सिक्किमका लिम्बूगाउँहरूबाट लिम्बूजातिका बारेमा सिरिजङगा र उनका चेलाहरूले लेखेका लेखोटहरू संकलन गरे ।
सन् १९५५ मा प्रोफेसर आर.के.स्प्रिङले हडसन पाण्डुलिपिमा पाइएका केही लिम्बु सामाग्रीहरू नेपाल ल्याएपछि इमानसिंह चेम्जोङले त्यसको अध्ययन गर्ने मौका पाए ।
उनले पाण्डुलिपिमा पाइएका सिरिजङ्गाका लेखोटहरूलाई सन् १९६१ मा ‘किरात मुन्धुम खाहुन’ भनेर प्रकाशमा ल्याएपछि मात्रै सिरिजङ्गाका बारेमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको भन्दा पनि हुन्छ ।
केही वर्ष अगाडि मात्र लिम्बू भाषा संस्कृतिका प्रकाण्ड विद्वान बैरागी काइँला र इतिहासकार डा. रमेश ढुंगेलले त हडसन परियोजना मार्फत लण्डनको लाइब्रेरीमा नै गएर अध्ययन गरे ।
यी खण्डहरू अध्ययन गर्न पाण्डुलिपिकै ८५ खण्डका ‘लक्ष्मी सम्वाद’ पत्रहरू हेरेमा सजिलो हुने देखिन्छ । उक्त खण्डमा जोभानसिं फागोले सिरिजङ्गाले लेखेका मुन्धुम र उपदेशहरूलाई भ्याएसम्म उल्था गरेका छन् । त्यस्तै इमानसिं चेम्जोङको ‘किरात मुन्धुम खाहुन’ले पनि यसमा सहयोग गर्छ ।सिरिजङ्गाले आफैं लेखेका लेखोट अध्ययन गर्न निकै चर्को पर्छ । उनले शब्दहरू असरल्ल ढंगले लेखेका छन् । बिराम राखिए पनि वाक्य बन्न अर्को विरामसम्म पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय शब्दहरू सिरिजङ्गा आफैंले बनाएका छन् । वाक्य बुझ्न एउटै व्यञ्जन संयोगले धेरै शब्दहरू अथ्र्याउनुपर्ने हुन्छ । मुन्धुमी शब्दहरू छन् । र, ती लिम्बु भाषा लिपिमा मात्रै लेखिएका छन् । यस्ता खण्डहरूको लिप्यान्तरण र उल्था पनि छैन ।
चेम्जोङले सरतचन्द्र दासले भने जसरी पद्मसंभवको अवतारी नवौं शताब्दीकालाई पहिलो सिरिजङ्गा र एच. एच.रिस्लेले भने जसरी विक्रमादित्यको शासनकाल पछिकालाई दोस्रो सिरिजङ्गा बनाएर दोस्रो सिरिजङ्गाको त जन्म मिति सन् १७०४-१७४१ तोकिदिए ।तिनै सिरिजङ्गा जसले लामा गुरुहरूबाट धेरै बौद्घष्टि मूल्य मान्यताहरु सिकेका थिए । यसकारण उनलाई नै गुरु पद्मसंभवका अवतारका रुपमा पनि चिनियो । उनलाई नै हिमालयन भुटिया पनि भनियो । याङरुपका दोर्जी लामा पनि भनियो ।
लेखक अर्जुनबाबु माबुहाङ, किरात संस्कृतिका अध्येता हुन्
बौद्घ र हिन्दु दुइटै सभ्यताबाट पनि दीक्षित सिरिजङ्गाले संकलन गरेका मुन्धुम र खाहुनहरूमा लिम्बु जातिको सामाजिक विकासको इतिहास भेटिन्छ । लिम्बू जातिको दर्शनको प्रारुप पनि पाइन्छ ।
लिम्बु शब्दहरूको त भण्डार नै भेटिन्छ र सिरिजङ्गाका बारेमा थप अनुसन्धान र उनका कार्यको विशेषगरी उनले आविश्कार गरेको सिरिजङ्गा लिपिको प्रचार-प्रसार गर्न सके सिंगो विश्वमा नेपालको सभ्यताको परिचय बन्ने निश्चित छ ।
प्रकाशित मिति: १७ मङ्सिर २०७४ ,आइतवार